ယေရှုကို မျှော်ကြည့်ခြင်း | Looking Unto Jesus | Real Conversion
ဇွန်လ ( ၁၁ ) ရက်၊ သခင်ဘုရားနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ဟောကြားသော
“ယုံကြည်ခြင်းကို အစအဦးစီရင်၍ စုံလင်စေတော်မူသော သ ခင်ယေရှုကို စေ့စေ့ထောက်ရှုကြကုန်အံ့။ ထိုသခင်သည် မိမိ ရှေ့၌ထားသော ဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းကြောင့်၊ ရှက် ကြောက်သောအရာကိုမမှတ်ဘဲ လက်ဝါးကပ်တိုင်၌ခံပြီးမှ၊ ဘုရားသခင်၏ပလ္လင်တော်လက်ယာဘက်၌ ထိုင်နေတော်မူ ၏။” ( ဟေဗြဲ ၁၂း ၂ )
ဤကျမ်းပိုဒ်က ခရစ်တော်၏သတင်းကောင်းအကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြသသည်။ စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်များယုံကြည်လက်ခံသော ရှင်းလင်းသည့်ဖော်ပြသည့်အချက်ကိုပေး သည့်ကျမ်းပိုဒ်ကို သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် မစဉ်းစားတတ်တော့ပါ။
ယခုတွင် ဤတရားဒေသနာတွင် အလေးထား၍ နားထောင်ရပါမည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်ကို ယူပြီး ကျွန်တော်တတ်နိုင်သလောက် အရှင်းလင်းဆုံးဖြစ်အောင် ရှင်းပြပါ့မည်။ ခရစ်တော်၏ အလင်းသည် မှောင်မိုက်နှင့်ရှုတ်ထွေးမှုသက်ရောက်ရာသင့်နှလုံးသားထဲတွင် ခရစ်တော်၏အ လင်းဖြစ်လာစေရန် ဤကျမ်းပိုဒ်သည် သင့်စိတ်နှလုံးကို ဖွင့်ပေးပါစေသော်။
လူတစ်ဦးသည် မှောင်မိုက်ထဲတွင်ရှိနေသည့်တိုင်အောင် ဘုရားကျောင်းသို့သွားနိုင်ပါ သည်။ သမ္မာကျမ်းစာကိုလည်း များစွာ သင်ယူလေ့လာနိုင်သည်။ သို့သော် ရှုတ်ထွေးမှု၊ ဖတ် ရှုထားသောအရာကို နားမလည်ခြင်းများစွာဖြင့် အမှောင်ဖုံးနေဆဲဖြစ်နိုင်သည်။ ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင်သည် “နားလည်စေသောမျက်စိကိုဖွင့်ပေးရန်” ဆုတောင်းမိပါသည်။ (ဧဖက် ၁း ၁၈) ဘုရားသခင်အလုပ်လုပ်ဆောင်မှသာလျှင် ဤကျမ်းပိုဒ်တွင်ရှိသောသမ္မာတရားအချို့ ကို စားသုံးနိုင်ပါသည်။
အခြေပြုကျမ်းက အခြေခံသမ္မာတရားသုံးခုကို ဖော်ပြထားပါသည်။
၁။	ယေရှုက သင့်အဖို့လုပ်ဆောင်ပေးသောအရာ၊
၂။	ယေရှုက ဤအရာကို လုပ်ဆောင်ပေးရသည့်အကြောင်းရင်း၊
၃။	ဤအကျိုးကို လက်ခံရရှိနိုင်သည့်နည်းလမ်း။
၁။	ပထမအချက်၊ ယေရှုက သင့်အတွက်လုပ်ဆောင်ပေးသောအရာ၊
“ယုံကြည်ခြင်းကို အစအဦးစီရင်၍ စုံလင်စေတော်မူသော သ ခင်ယေရှုကို စေ့စေ့ထောက်ရှုကြကုန်အံ့။…… ရှက်ကြောက် သော အရာကိုမမှတ်ဘဲ လက်ဝါးကပ်တိုင်၌ခံပြီးမှ၊ ဘုရားသ ခင်၏ပလ္လင်တော်လက်ယာဘက်၌ ထိုင်နေတော်မူ၏။” ( ဟေ ဗြဲ ၁၂း ၂ )
“သည်းခံခြင်း” ဟူသော ဂရိစကားလုံးသည် “ဒုက္ခဝေဒနာခံစားခြင်းကို သည်းညည်းခံ ခြင်းဖြစ်သည်” ဟုဆိုလိုသတည်း။ ယေရှုသည် ခံစားနေရသောဝေဒနာနှင့်ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှု ကို သင့်ဝိညာဉ်အပြစ်ဒဏ်ကလွတ်မြောက်ရန် သည်းခံခဲ့ရသည်။ Poole က ဤသို့ဆိုပါသည်။
(ခရစ်တော်)သည် လက်ဝါးကပ်တိုင်ကို (ဝမ်းနည်းခြင်းများစွာဖြင့်) သယ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ စိတ်ဝိညာဉ်ဝမ်းနည်းခြင်း၊ ကိုယ်ခန္ဒာ နာကျင်ခြင်း၊ (ရိုက်နှိပ်ခြင်း)၊ ခုတ်ထစ်ခြင်း၊ ဆူးသရဖူဆောင်းစေ ခြင်း၊ ကြာပွတ်ဖြင့်ရိုက်ခြင်း၊ ခြေလက်များကို သံမှိုဖြင့်ရိုက်ခြင်း၊ နတ်ဆိုးကြွတ်များ၊ သို့မဟုတ် အမျက်ဒေါသသည် သူ့ကို ထိခိုက် နာကျင်စေသည်။ သူသည် ထံရသောဝန်ကြောက် ပင်ပန်းနွမ်းနယ် နေသည်။ ထိုအထဲတွင် အားနည်းခြင်းမရှိစေရန် လက်လျော့ခြင်း မရှိတော့ပါ။ အနိုင်ယူ၍မရနိုင်သောနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း၊ ကောင်းမွန် သည့်သတ္တိတို့သည် သူအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကြိုတင်နိမိတ် ဖတ်ထားသောအရာအားလုံးကို သူ တွေ့ကြုံရပါသည်။ (ဟေရှာ ၅၃)! (မဿဲ Poole ၊ ဟေဗြဲ ၁၂း ၂ ကို မှတ်ချက်ပေးထားသည်။)
ထို့နောက်၊ ခရစ်တော်သည် “ရှက်ကြောက်နေရသော်လည်း” ကားတိုင်ပေါ်တက်ခဲ့ သည်။ (ဟေဗြဲ ၁၂း ၂) “သော်လည်း” ဟူသည်မှာ “အသေးအမွါးအဖြစ်ခံယူကာ” သို့မဟုတ် “အနည်းအကျဉ်းအဖြစ်ထင်မှတ်ကာ” ဟုဆိုလိုသတည်း။ ယေရှုသည် အနည်းငယ်သောအမှု ဟုသာ မှတ်ယူသည်။ သင့်အား ကယ်တင်ရန်နှင့်ဘုရားသခင်အား ဘုန်းထင်ရှားစေရန်ပင်ဖြစ် ပါသည်။ “အရှက်ကိုငြင်းပယ်သည်။” ဤနေရာ၌ အရှက်တရားဟူသည်မှာ “အသရေပျက် ခြင်း”ပင်ဖြစ်ပါသည်။ သင်သည် အပြစ်တရားလက်မှလွတ်မြောက်ရန်အတွက် ယေရှုသည် အသရေပျက်ခံတော်မူခဲ့သည်။ သင့်ကိုယ်စား အသရေပျက်ခံတော်မူခဲ့သည်။ သို့ဖြစ်၍ နောက် ဆုံးသောနေ့ရက် တရားစီရင်ရာကာလတွင် သင်သည် အသရေပျက်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်မည်။
ယေရှုသည် ရိုက်ပုတ်ခြင်းခံရသောကြောင့် အသရေပျက်ခဲ့ရသည်။ တံတွေးတွေးခြင်း ခံရသောကြောင့် အသရေပျက်ခဲ့ရသည်။ “သူ့ကို ကားတိုင်ပေါ်တင်ကြ၊ သူ့ကို ကားတိုင်ပေါ် တင်ကြ” ဟု စိတ်ဆိုးလျက် ဆိုကြသောကြောင့် အသရေပျက်ခဲ့ရသည်။ အဝတ်ရှိသမျှကို ဆုတ်ဖြဲခဲ့ကြသောကြောင့် အသရေပျက်ရသည်။ လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် အဝတ်အချည်းစည်း ရှိသောကြောင့် အသရေပျက်ရသည်။
သူသည် သင့်ကိုယ်စား အသရေပျက်ရသည်။ ရှက်ကြောက်ရသည်။
“အကြောင်းမူကား ခရစ်တော်သည် …… ဖြောင့်မတ်သောသူသည် မဖြောင့်မတ်သောသူတို့အတွက်၊ ဒုစရိုက်အပြစ်များကြောင့် တခါ ခံတော်မူ၏။” ( ၁ပေ ၃း ၁၈ ) )
“ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်ရှိသမျှကို သူ့အပေါ်တင်တော် မူ၏။”
( ဟေရှာယ ၅၃း ၆ ) )
သင်ခံရမည့်ပြစ်ဒဏ်ကို ယေရှုက ခံတော်မူခဲ့သည်။ ယေရှုကို သင့်ကိုယ်စား အသေသတ်ခြင်း ခံရသည်။
ယေရှုသည် သင့်ကိုယ်စား ရှက်ကြောက်ရသည်။ နောက်ဆုံးသောတရားစီရင်ခြင်း တွင် သင်ပြုမိသောအပြစ်ရှိသမျှကို ဘုရားသခင်က ဖတ်ကြားတော်မူလိမ့်မည်။ ထိုအရာက ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးရှေ့တွင် အရှက်ခွဲလိမ့်မည်။ သင်သည် ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်ကိုးစားလျှင် သူသည် သင့်ကိုယ်စား အရှက်တကွဲဖြစ်ခဲ့သည်။ အဝတ်အချည်းစည်းရပ်ခြင်းဖြင့် သင့်အပြစ် ကြောင့် အရှက်ရပြီးဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် သင့်ကိုယ်စား အဝတ်အ ချည်းစည်းဖြစ်ခဲ့ရသည်။ သူ့ကို ယုံကြည်ကိုးစားလျှင် သင့်ကိုယ်စားဖြစ်ပေမည်။
သမ္မာကျမ်းစာက ထိုကားတိုင်ပေါ်၌ ယေရှုခရစ်တော်၏ “ကိုယ်စားရန်ငြိမ်းခြင်း” အ ကြောင်း သွန်သင်ပေးထားသည်။ ဒေါက်တာ P. B. Fitzwater က ဤသို့ဆိုသည်။
“သူ၏အပြစ်ဖြေခြင်းသည် ကိုယ်စားခံခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည် မှာ အခြားသူအတွက် ကိုယ်စားလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် အ ခြားသူ၏ကိုယ်စားပြုခြင်းဖြစ်သည်။ (Christian Theology, Eerdmans, ၁၉၄၈၊ စာ- ၄၂၆ )
အင်္ဂလိပ်စကားလုံး “ကိုယ်စား” ဟူသည်မှာ “အခြားသူများနေရာတွင် တစ်ဦးဦးက နေရာယူ ခြင်း” ဟုဆိုလိုသတည်း။ (Webster’s New Collegiate Dictionary, ၁၉၆၀) )
၎င်းမှာ ယေရှုခရစ်က သင့်ကိုယ်စား အမှန်တကယ် လုပ်ဆောင်ပေးသောအရာပင်ဖြစ် ပါသည်။ “တစ်ဦး(သင်)အတွက် အခြားတစ်ဦး(ခရစ်တော်)က နေရာယူပေးခြင်းဖြစ်သည်။” သင်ခံထိုက်သောအပြစ်ဒဏ်ကို သူခံပေးခဲ့သည်။
“ခရစ်တော်သည် လူများအပြစ်တို့ကိုခံခြင်းငှါ တခါးတည်းပူဇော် တော်မူ၏။” ( ဟေဗြဲ ၉း ၂၈ ) )
“ကျမ်းစာလာသည်နှင့်အညီ ခရစ်တော်သည် ငါတို့အပြစ်ကြောင့် အသေခံတော်မူသည်။” ( ၁ကော ၁၅း ၃ )
အပြစ်နှင့်ထိုက်တန်သောပြစ်ဒဏ်ကို ယေရှုက ပေးဆပ်ခဲ့ပြီးပြီ။ အဖိုးအခကို သူပေးခဲ့ပြီ။
ကျွန်ုပ်ဘထွေးသည် အကြမ်းခံသည် ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောသားဖြစ်သည်။ တခါက မောမောနှင့်ရဲသားတစ်ယောက်ကို ကန်ကျောက်လိုက်သည်။ သူ့ကို အချုပ်ထဲပို့လိုက်ကြ သည်။ ညသန်းခေါင်းချိန်တွင် အမေက သူ့အား အာမခံဖြင့်ထုတ်ပေးရန် Ed Gallick ကို ခေါ် လိုက်သည်။ Ed သည် အချုပ်ခန်းသို့သွား၍ အာမခံကြေးကို ပေးခဲ့သည်။ ဘထွေးကို လွတ် လပ်ခွင့်ပေးကြသည်။ သူသည် ထောင်ထဲကလွတ်မြောက်လာလျှင် Ed ကိုတွေ့လိုက်သဖြင့် “ဒီမှာဘာလာလုပ်နေသလဲ” ဟု မေးလိုက်သည်။
ယေရှုလုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သောအရာကို ထိုအရာက သတိပေးလိုက်သည်။ သင့်အပြစ် ကြောင့်ငရဲသွားရမည့်အပြစ်ဒဏ်၏အခကြေးကို ခရစ်တော်က ပေးလိုက်ပြီးပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်မျှော်ကြည့်၍ “ဒီမှာ ဘာလာလုပ်နေသလဲ” ဟု ဆိုရမည်သာ။ အဖြေမှာ သူသည် ဘုရားသခင်၏ငရဲထောင်ထဲကလွတ်မြောက်လာစေရန် သူသည် အာမခံကြေးပေး ခဲ့ သည်ဟူ၍ပင်ဖြစ်ပါသတည်း။ ယေရှုကို ယခု ကိုးစားယုံကြည်လိုက်ပါ။
၂။	ဒုတိယအချက်၊ ယေရှုသည် ဤသည်ကို သင့်အဖို့ လုပ်ဆောင်ပေးရသည့်အ ကြောင်းရင်း။
( ဟေ ဗြဲ ၁၂း ၂ ) )
ယေရှုသည် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်သို့သွားခဲ့သည်။ သူသည် အချိန်မရွေးလွတ်မြောက် ရန် တန်ခိုးရှိသည်။ သို့ရာတွင် “အသေခံမည့်သိုးသူငယ်ကဲ့သို့ ဆောင်ယူခြင်းကိုခံရသည်။” (ဟေရှာယ ၅၃း ၇) သင့်အပြစ်အတွက်ပေးဆပ်ရန် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်သို့ အဘယ့်ကြောင့် သွားခဲ့သနည်း။ “သင့်အားလွတ်မြောက်စေသောဝမ်းမြောက်ခြင်း” ကိုလုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်ပါ သည်။ (ဟေဗြဲ ၁၂း ၂ )
ပထမအချက်အနေဖြင့် ကောင်းကင်ဘုံသို့ဝင်ရောက်သည့် ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိသည်။ ယေရှုသည် လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင်အသေခံပြီးသည်နှင့် ကောင်းကင်သို့ ချက်ချင်းဝင်ရောက် ကြောင်းကို သိခဲ့သည်။ သူနှင့်အတူအသေသတ်ခြင်းခံရသော သူခိုးအား “ယနေ့တွင် ပရဒိသု ဘုံ၌ ငါနှင့်အတူရှိမည်” ဟုဆိုသည်။ (လုကာ ၂၃း ၄၃)
ထို့နောက် ကောင်းကင်သို့ဝင်ရောက်ခြင်းအတွက် ဝမ်းမြောက်ခြင်းကို မျှော်လင့်ပါ သည်။ ပြောင်းလဲလာသောသူခိုးကိုမြင်သောအခါ ယေရှုသည် အဘယ်မျှလောက်ပျော်ရွှင်မည် နည်း။ သင့်ကိုမြင်သောအခါတွင်လည်း အဘယ်မျှလောက်ဝမ်းမြောက်မည်နည်း။
မနေ့က ခရစ်တော်ကိုပို့ဆောင်ရသောလူများစွာကို တွေ့ရသည်။ တစ်ဦးမှာ သင်း ထောက်ခေါင်းဖြစ်သည်။ အခြားသူမှာ လက်ထောက်သင်းအုပ်ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း လေးဆယ်ကျော် ခရစ်တော်ထံသို့ ကျွန်ုပ်ပို့ဆောင်ပေးသော ဤသူတို့ကိုမြင်ရလျှင် ဝမ်း မြောက်ရ၏။ ဤသည်မှာ ကောင်းကင်ဘုံတွင် တွေ့ကြုံရန် ခရစ်တော်မျှော်လင့်သော ဝမ်း မြောက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့် လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် အသေခံစေသည်။ “သားများစွာကို ဘုန်းတော်အတွက်” ခေါ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ (ဟေဗြဲ ၂း ၁၀)
သို့ဖြစ်သောကြောင့် ယေရှုသည် “ယုံကြည်ခြင်းကိုအစပြုသောသူဖြစ်သည်။” သူ သည် ကျွန်ုပ်တို့အထဲက ယုံကြည်ခြင်းကို စီရင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကို စုံလင်စေသည်။ အကာအ ကွယ်ပေးသည်။ ကယ်တင်ခြင်းသည် ခရစ်တော်၌ စုံလင်လျက်ရှိသည်။
၃။	တတိယအချက်၊ ဤအကျိုးကို လက်ခံရရှိသည့်နည်းလမ်း။
“ဘုရားသခင်၏လက်ယာတော်ဘက်၌ထိုင်နေတော်မူသော ……. ယေရှုခရစ်ကို ထောက်ရှုကြကုန်အံ့။” ( ဟေဗြဲ ၁၂း ၂ ) )
တမန်တော်ထဲတွင်ရှိသော တမန်တော်များသည် ကောင်းကင်ဘုံသို့ ခရစ်တော်ပြန် လည်တက်ကြွတော်မူပြီး ဘုရားသခင်၏လက်ယာဘက်တွင်ထိုင်နေတော်မူသည် အကြောင်း ကို တိုက်ရိုက်ညွှန်းဆိုခြင်းမရှိဘဲ ခက်ခက်ခဲခဲ တရားဟောခဲ့ကြပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခေတ်ကာ လတွင် တမန်တော်များဟောသကဲ့သို့ ကောင်းကင်ဘုံသို့တက်ကြွတော်မူသည်အကြောင်းကို ဟောပြောရန်လိုအပ်ကြောင်း သိလာပါသည်။ ထိုအရာနှင့်ပတ်သက်သည့် အကြောင်းပြချက် များကို တင်ပြထားပါသည်။
၁။	ခမည်းတော်၏လက်ယာဘက်တွင်ထိုင်နေရန် ခရစ်တော်၏ ပြန် လည်တက်ကြွတော်မူခြင်းက ခရစ်တော်နှင့်ခမည်းတော်သည် မ တူညီသည့် ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ပါးဖြစ်ကြောင်းကို ရှင်းလင်းစေပါသည်။ သုံးပါးတစ်ဆူနှင့်ပတ်သက်၍သမ္မာကျမ်းစာအယူအဆမှာ ယနေ့ တွင် မပီပြင်မှုန်ဝါးလာသည်။ ဖြစ်နိုင်ခြေအယူအဆရှိသောမှား ယွင်းသူတို့သည် ဤအရာကိုမသိဘဲ မှားယွင်းနေကြပါသည်။
၂။	ပြန်လည်သင့်မြတ်ခြင်း၊ ရန်ငြိမ်းခြင်း၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့်ဆိုင် သော ကျမ်းစာသွန်သင်ချက်များသည် ခမည်းတော်နှင့်သား တော်ကို သီးခြင်းစီအဖြစ် သုံးပါးတစ်ဆူတွင်မတွေ့မြင်သ၍ ပျောက်ဆုံးနေပေမည်။ ခရစ်တော်၏ကြားဝင်ဖြန်ဖြေခြင်းအလုပ် သည် ပြန်လည်တက်ကြွခြင်းအားဖြင့် သိသာထင်ရှားစေသည်။
၃။	ဆုံးဖြတ်ချက်ဝါဒကို ပြန်လည်တက်ကြွခြင်းတရားဒေသနာအား ဖြင့် ကုသရမည်။ တက်ကြွသောခရစ်တော်ထံလူတို့ပြန်လာခြင်း က ဆုံးဖြတ်ချက်ဝါဒမျိုးစုံကို ကုသပေးသည်။
လွန်ခဲသောအချိန်က တရားဟောဆရာတစ်ဦးသည် ဖာရိရှဲနှင့်အခွန်ခံအကြောင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး တရားဒေသနာကောင်းတစ်ခုဟောပြောသည်ကို ကြားခဲ့ရသည်။ (လုကာ ၁၈း ၉- ၁၄) ဆုံးဖြတ်ချက်ဝါဒီပုံစံမျိုးဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းသည် “အပြစ်သားဆုတောင်းခြင်း” ကို ရွက်ဆိုခြင်း၊ ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဘုရားကျောင်းသွားခြင်း စသဖြင့်သော လုပ် ဆောင်ချက်များဖြင့်မရနိုင်ကြောင်း ပြသခဲ့သည်။ ထို့နောက် သူက “သင်တို့သည် ယေရှုကို ယုံ ကြည်လက်ခံရမည်” ဟုဆိုသည်။ ကျွန်ု္ပ်အနေဖြင့်ပြောရလျှင် “အဆင်ပြေသည်” ဟု မှတ်ယူ သည်။ သို့သော် နောက်ထပ်သူပြောသည်မှာ “ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းက သူသည် သင့်အပြစ် အတွက် အသေခံသည်ကို ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်ကို ဆိုလိုသည်” ဟုဆိုလိုက်သည်။ “ဒါမှား နေပြီ။ ယေရှုကိုယ်တိုင်ကိုယုံကြည်ခြင်းနှင့်ဤခံယူချက်ကိုယုံကြည်ခြင်းကို သူရောကုန်ပြီ” ဟု ကျွန်ုပ်ပြောလိုက်သည်။
ဤတရားဟောသူက ပျောက်ဆုံးသောအပြစ်သားများကိုမေးမြန်းလျက် တရားဒေသ နာကို အဆုံးသတ်သည်ကို အလွန်နှစ်သက်သဘောကျသည်။ ထိုခရစ်တော်သည် ကောင်း ကင်ဘုံသို့တက်ကြွပြီး ဘုရားသခင်၏လက်ယာတော်ဘက်တွင် ထိုင်နေလျက်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့မျှော်ကြည့်ရာနေရာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သောသူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကယ် တင်ခြင်းရောက်သည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
“သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်လော့၊ ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့် မည်။” ( တမန် ၁၆း ၃၁ )
မျှော်ကြည့်အသက်ရှင်ပါ၊ ချစ်မိတ်ဆွေ၊ အသက်ရှင်ပါ၊
ယေရှုကို ယခုမျှော်ကြည့်၍ အသက်ရှင်ပါ။
( “မျှော်ကြည့်အသက်ရှင်ပါ၊” William A. Ogden, ၁၈၄၁-၁၈၉၇ )
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ မစ္စတာ Noah Song က ကျမ်းစာဖတ်ကြားသည်။ ယောဟန် ၁၂း ၂၈-၃၂။
“မျှော်ကြည့်အသက်ရှင်ပါ"၊ (William A. Ogden, ၁၈၄၁-၁၈၉၇ ရေးစပ်သည်။)
“ယုံကြည်ခြင်းကို အစအဦးစီရင်၍ စုံလင်စေတော်မူသော သခင် ယေရှုကို စေ့စေ့ထောက်ရှုကြကုန်အံ့။ ထိုသခင်သည် မိမိရှေ့၌ ထားသော ဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းကြောင့်၊ရှက်ကြောက်သော အရာကိုမမှတ်ဘဲ လက်ဝါးကပ်တိုင်၌ခံပြီးမှ၊ ဘုရားသခင်၏ပလ္လင် တော်လက်ယာဘက်၌ ထိုင်နေတော်မူ ၏။” ( (ဟေဗြဲ ၁၂း ၂) )
“ရှက်ကြောက်ခြင်းကိုဖယ်၍ ကားတိုင်ကိုထမ်းသည်။” ၁ ပေ ၃း ၁၈၊ ဟေရှာ ၅၃း ၆၊ ဟေဗြဲ ၉း ၂၈၊ ၁ကော ၁၅း ၃။
၂။	ဒုတိယအချက်၊ ယေရှုသည် ဤသည်ကို သင့်အဖို့ လုပ်ဆောင်ပေးရ သည့်အကြောင်းရင်း။ “သင့်ရှေ့တွင်ထားသော ဝမ်းမြောက်ခြင်းအဖို့”
ဟေရှာယ ၅၃း ၇၊
၁။ ကောင်းကင်ဘုံသို့ဝင်စားရသည့်ဝမ်းမြောက်ခြင်း၊ လုကာ ၂၃း ၄၂
၂။ ကောင်းကင်ဝင်သည့်သင့်အား မြင်ရသည့် ဝမ်းမြောက်ခြင်း၊ ဟေဗြဲ ၂း ၁၀။
၃။	တတိယအချက်၊ ဤအကျိုးကို လက်ခံရရှိသည့်နည်းလမ်း။ “ယေရှုကို ထောက်ရှုခြင်း ဘုရားသခင်၏လက်ယာတော်ဘက်၌ ထိုင်နေတော်မူသည်”
(တမန် ၁၆း ၃၁ ။